KULMIYE Party » Videos Videos – KULMIYE Party
" frameborder="0" allowfullscreen>">
July 20, 2017 Xisbiga Kulmiye ,
Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo Qaatay Kaadhkiisa Codbixinta
July 30, 2017 KULMIYE iyo Hiigsiga ,
Gudddoomiyaha KULMIYE oo ka hadlay Hiigsiga Qorshaha horumarinta Qaranka SL
July 26, 2017 Murrashaxa Kulmiye ,
Murrashax Muuse Biixi oo khudbad dhiirrigalinaysa Dhallinyarada Jeediyay[:]
August 01, 2017 Maxamed Kaahin ,
Khudbaddii Muj. Maxamed Kaahin Axmed ee Shirkii Kulmiye UK
July 27, 2017 Xoghayaha Xisbiga Kulmiye ,
Xoghayaha Guud ee KULMIYE oo tilmaamay barmaamijka xisbiga ee dhallinyarada
July 22, 2017 Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye ,
Guddoomiyaha KULMIYE oo ka warramay kulan ay wada qaateen Gud. Guurtida iyo baaq nabadeed oo uu diray
July 19, 2017 Soo dhawaynta Muuse Biixi ,
Soo Dhaweynta Murrashaxa Xisbiga Kulmiye ee Degmada Sheekh
July 20, 2017 Xildhibaan Kijandhe ,
Xildhibaan Kijaandhe oo Shaaciyey inay Dhammaatay Camiraaddii Xisbiyada mucaaradka
July 20, 2017 Maareeye Cali Xoor-xoor ,
Maareeye Cali Xoor-xoor oo ku baaqay in danta Qaranka loogu doorto Muuse Biixi
July 27, 2017 Siyaasi Xinif ,
Siyaasi Xinif oo ka warramay aasaaskii iyo taariikhda KULMIYE soo maray
July 27, 2017 Garabka Dhallinyarada ,
Guddoomiyaha Garabka Dhallinyarada KULMIYE iyo hadalkiisii soo dhawaynta MIDNIMO
August 01, 2017 Axmed Muumin Seed ,
Khudbaddii Siyaasi Axmed Muumin Seed ee kulankii London
August 01, 2017 Jaamac Shabeel ,
Jaamac Shabeel oo reer London khudbad u jeediyay
July 01, 2017 Musharaxa Kulmiye oo Hambalyo u diray ardayda ,
Guddoomiyaha KULMIYE oo Hambalyo U Diray Ardayda Somaliland Ee Maanta Imtixaanka Qaranka U Fadhiistay
August 11, 2017 Kalabaydh ,
SOOL: Murrashax Muuse biixi oo khudbad muhiim ah u jeediyay Kumannaan reer Kalabaydh ah
August 03, 2017 Guddoomiyaha Dhallinyarada ,
Guddoomiyaha Garabka Dhallinyarada KULMIYE oo hambalyeeyey dhallinyarada xisbiga
August 01, 2017 Xasan Gaafaadhi ,
Afhayeenka KULMIYE oo kashifay Fadeexadaha Musuqa ah ee Abiib Timacad, Ismaaciil Yare iyo WADDANI
August 03, 2017 Dheere ,
Guddoomiye-ku-xigeenka 2aad ee KULMIYE oo ka hadlay muhiimada dhallinyarada
August 03, 2017 Boosaha ,
Wasiirka Boosaha oo tilmaamay waxtarka dhallinyarada taageerta KULMIYE
August 03, 2017 Qabyo-tire ,
Wasiir Qabyo-tire oo ka hadlay dhallinyarada iyo doorka xukuumadda KULMIYE
August 04, 2017 Dooddii ,
Barnaamijka Dooddii Muuse Biixi iyo Faysal Cali Waraabe oo Dhammaystiran
August 06, 2017 Jamaal ,
‘Dadku way Xusuus dheeryihiin oo qofka cayda xun ma jecla’ – Jamaal Cali Xuseen
August 06, 2017 Amb. Cawil ,
‘Taariikhdu nabsi bay leedahaye waxa Muuse Biixi u hiilinaya nabsigii’ – Amb. Cawil
August 06, 2017 Biixi ,
Murrashaxa KULMIYE oo khudbad u jeediyey dadweynaha degmada Laasa-dacawo oo casuumay
August 08, 2017 Barnaamij ,
Murrashax Muuse Biixi oo la hadlay kumanaan qof oo ku soo dhaweeyey Suuqsade
August 08, 2017 Samaale ,
Guuldarrada Inaad Aqbashaa Guusha ayay ka mid tahay ” Cabdicasiis M. Samaale
August 08, 2017 Warancadde ,
Cali Warancadde oo u soo jeediyey WADDANI inay u daydaan raadkii KULMIYE
August 08, 2017 Aw Jaamac ,
Suldaan Sayid Aw Jaamac oo taxay qodobbada lagu dooranayo Murrashax Muuse Biixi
August 08, 2017 Magaalada Gugux ,
Deegaanka Gugux oo hadyad qaali ah guddoonsiiyey Guddoomiye Muuse Biixi
August 08, 2017 Khudbad uu Murrashaxa Kulmiye ka jeediyay magaalada Caynabo ,
Guddoomiyaha KULMIYE oo bulshada Caynaba u sheegay ballanqaad muhiim ah
August 09, 2017 Guumays ,
Murrashax Muuse Biixi iyo khudbaddii uu ka jeediyey Deegaanka Guumays
August 09, 2017 Madaxtooyada ,
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland oo sharraxay xisbiga KULMIYE iyo murrashaxiisa
August 09, 2017 Yagoori ,
Guddoomiye Muuse Biixi oo tilmaamay doorkii deegaanka Yagoori ee nabadda Somaliland
August 10, 2017 Yagoorri ,
Guddoomiye Muuse Biixi oo tilmaamay doorkii degaanka Yagoori ee nabadda Somaliland
August 11, 2017 Laascaanood ,
Khudbad miisaan culus leh oo Guddoomiyaha KULMIYE ka jeediyey Laascaanood
September 16, 2017 Muse Bihi ,
Ka Bogo khudbaddii Guddoomiyaha, ahna murrashaxa Madaxweynaha xisbiga KULMIYE Mudane Muuse Biixi ka jeediyey daah-furkii barmaamij-siyaasadeedka xisbiga.
September 13, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Guddoomiye-ku-xigeenka 1aad ee KULMIYE Md. Maxamed Kaahin oo khudbad ka jeediyey xaflad loo sameeyey xidhitaanka diiwaangelintii codbixiyayaasha.
September 21, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Guddoomiyaha Garabka Dhallinyarada heer Qaran ee xisbiga KULMIYE Md. Cabdi-najax oo ka hadlay casuumad dhallinyaro xisbiga ka tirsani u sameeyeen Guddoomiye-ku-xigeenka Golaha Wakiillada.
August 14, 2017 Muuse Biixi Boogays ,
Guddoomiye Muuse Biixi oo dardaaran culus siiyey shacabka Awr Boogays
August 14, 2017 Dagmada Boogays ,
Haldoorka bulshada Degmada Awr Boogeys oo taageeray Murrashaxa KULMIYE
August 14, 2017 Muse ,
DAAWO: Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo khudbad cajiib ah oo nooceedu ku cusubyahay dhegaha reer Somaliland ka jeediyey magaalada Ceerigaabo oo si wayn loogu soo dhaweeyey maanta.
August 14, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Amb. Cali Cali Ducaale oo shacabka u kala saafay madaxweynaha Somaliland u baahan tahay inay doorato.
August 14, 2017 ,
DAAWO: Murrashaxa Madaxweynaha xisbiga KULMIYE oo kormeeray goobo ka mid ah kuwa ay ka socoto kaadh qaadashada magaalada Ceerigaabo.
August 15, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Wasiiru-dawlaha Caafimaadka Somaliland oo farriin digniin ah oo ku saabsan ballanqaadyada beenta ah ee WADDANI u diray dadweynaha reer Somaliland.
DAAWO: Wasiirka Warfaafinta oo hadal soo dhawayn iyo dardaaran isugu jira u jeediyey taageerayaal ka soo jeeda degmada Maydh oo muujiyey taageerada ay u hayaan xisbiga KULMIYE iyo murrashaxiisa Madaxweynaha.
DAAWO: Amb. Cawil oo tilmaamay xusuusta ay u leedahay taariikh hore u dhexmartay isaga iyo Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE Muuse Biixi.
DAAWO: Guddoomiyaha KULMIYE oo hadal isugu jira soo dhawayn iyo xog-warranka taariikh hore u soo dhexmartay isaga iyo Amb. Cawil u jeediyey taageerayaal reer Maydh ah oo is muujiyey.
DAAWO: Murrashaxa jagada Madaxweynaha KULMIYE oo khudbad muhiim ah oo dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey bulshada ku dhaqan Hadaaftimo oo casuumad soo dhawayn ah u sameeyey.
DAAWO: Hadalkii suldaanka guud ee deegaanka bariga Sanaag ka jeediyey martiqaadkii uu u fidyey Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE
DAAWO: Mid ka mid ah odayaasha waawayn ee Hadaaftimo oo hore uga soo qaybgalay aasaaskii Somaliland iyo nabadaynteedii oo khudbad ka jeediyey soo dhawayntii weftiga Guddoomiyaha KULMIYE ee deegaankaasi.
DAAWO: Bulshada ka soo jeeda deegaanka Jiidali oo soo dhawayn iyo taageero u muujiyey xisbiga KULMIYE iyo murrashaxiisa Madaxweynaha.
DAAWO: Murrashax Muuse Biixi oo warramay siyaasiyiin waawaynaa oo ka soo jeeday deegaanka Jiidali oo lagu soo dhaweeyey isaga iyo wefti uu hoggaaminayey.
August 16, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Murrashax Muuse Biixi oo khudbad ka jeediyey casuumad soo dhawayn iyo hadhimo-shareef ah oo loogu sameeyey deegaanka DAYAXA ee gobolka Sanaag.
DAAWO: Xildhibaan Ibraahim Rayte oo si rasmi ah ugu biiray xisbiga KULMIYE, farriina u diray xisbiga WADDANI.
DAAWO: Wasiirka Warfaafinta Cismaan Caddaani oo si adag u duray hadal dhawaan ka soo yeedhay Murrashaxa xisbiga WADDANI
DAAWO: Wasiirka Madaxtooyada oo khudbad uu ka jeediyey deegaanka DAYAXA oo lagu casuumay weftiga KULMIYE maanta kaga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay arrin ku saabsan Xabkaha iyo Faleenka Sanaag.
August 23, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Afhayeenka KULMIYE Md. Xasan Gaafaadhi oo iftiimiyey dood dafiic ah oo ay ku doodaan xisbiga WADDANI.
DAAWO: Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka DAYAXA ee Sanaag oo soo dhawayn iyo taageero ku qaabilay Guddoomiyaha KULMIYE iyo weftigiisa.
DAAWO: Ambassador Axmed Xasan Cigaal oo faahfaahin ka bixiyey taariikhda Qadiimiga ah ee uu leeyahay deegaanka DAYAXA.
DAAWO: Wasiir Maxamuud Xaashi oo si adag uga hadlay khilaafka Golaha Wakiillada, kuna tilmaamay layli aan siyaasadda aqoon u lahayn xisbiga WADDANI.
August 17, 2017 Muse Bihi ,
Daawo Boqor Buurmadow oo sheegay inay beeshiisu diyaar u tahay doorashada Muuse Biixi
DAAWO: Guddoomiye Muuse Biixi oo khudbad ka kooban qodobo muhiim ah u jeediyey reer Ceel-afwayn.
DAAWO: Suldaanka guud ee deegaanada Gar-adag Suldaan Carab Cabdi Cali oo si buuxda u caddeeyey in bulshada uu suldaanka u yahay taageersantahay xisbiga KULMIYE.
Guddoomiyaha KULMIYE oo jeediyey khudbad uu ku cabbiray dareenka uu ka qaatay soo dhawayn baaxad leh oo dadweynaha degmada Gar-adag ku qaabileen.
DAAWO: Xafladda taageerayaasha xisbiga KULMIYE ee ku bahoobay ururka CUDUD iyo COD oo lagu qabtay Hargeysa maanta.
DAAWO: Guddoomye-ku-xigeenka 1aad ee KULMIYE oo tilmaamay siyaasadda xisbiga uga meel-taal siyaasiyiinta WADDANI ee caytama.
DAAWO: Wasiirka Warshadaha oo caddeeyey in xisbiga KULMIYE diyaar u yahay doorasho waqtigeeda ku qabsoonta.
August 24, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Murrashax Muuse Biixi oo dhex lugeeyey suuqyada Hargeysa, soo dhawayn iyo kalgacal wayna kala kulmay dadweynaha caasimadda
August 26, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo ka hadlay heerka adeegga caafimaadka Somaliland marayo iyo halka la gaadhsiin karo mustaqbalka.
DAAWO: Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo tibaaxay adeeg caafimaad wanaagsan oo Somaliland gaadhi doonto.
DAAWO: Siyaasi Maxamed Abiib oo khudbad muhiim ah u jeediyey qurba-joogga Gobollada Awdal iyo Salal
August 28, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo Khudbad u jeediyey hablo fara badan oo ah aqoonyahanka reer Somaliland ee haysta shahaadada labaad (Masters Degree).
DAAWO: Guddoomiye-ku-xigeenka koowaad cusub ee Golaha Wakiillada oo khudbad u jeediyey haween aqoonyahan ah oo kulan la yeeshay Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE.
DAAWO: Hablaha aqoonyahanka Somaliland kulan la qaatay Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE Mudane, Muuse Biixi.
DAAWO: Jawaabaha uu Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE ka bixiyey su’aalo ay waydiiyeen hablo aqoonyahanka Somaliland ka mid ah oo kulan taageero ah la yeeshay.
August 30, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Xisbiga KULMIYE oo xaflad ballaadhan ugu qabtay masuuliyiin iyo siyaasiyiin ka soo digo-rogtay xisbiga WADDANI.
DAAWO: Siyaasiga Axmed Muumin Seed oo shacabka farta ugu tilmaamay ceebaha dul-hogonaya xisbiga WADDANI
September 01, 2017 Munaasibadda Ciidda ,
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE oo Bulshada Somaliland Hambalyo u diray
September 03, 2017 Muse Bihi ,
Guddoomiyaha KULMIYE oo Khudbad u jeediyay Kumannaan Dadweynaha Boorama ah
DAAWO: Xildh. Saleebaan Cali Koore oo khudbad uu ka jeediyey fagaaraha khayriyada Boorama ku faray farriin muhiim ah oo uu u jeediyey KULMIYE.
DAAWO: Khudbad uu Suldaan Dhawal u jeediyey shacabka reer Boorama oo si ballaadhan u soo dhaweeyey weftiga KULMIYE.
DAAWO: Ku-simaha Madaxweynaha Somaliland oo khudbad xambaarsan hambalyo, hogo-tusaalayn iyo daraaran uga jeediyey shacabka Boorama fagaaraha khayriyadda
September 04, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Soo dhawayntii weftiga xisbiga KULMIYE ee degmada DILLA oo lagu qaabilay roog-cas
DAAWO: Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE Mudane, Muuse Biixi oo khudbad muujinaysa hoggaamiyenimadiisa ka jeediyey xaflad loo sameeyey dufcaddii 16 aad ee Jaamacadda CAMUUD oo ay ka qallinjabiyeen 725 arday oo lagu qabtay Boorama maanta.
DAAWO: Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland oo khudbad isugu jirta hambalyo iyo dardaaran muhiim ah siiyey arday ka qallinjabisay dufcaddii 16aad ee jaamacadda CAMUUD.
DAAWO: Khudbad Guddoomiye-ku-xigeenka kowaad ee Golaha Wakiillada Somaliland u jeediyey ardayda ka qallinjabisay jaamacadda Camuud.
DAAWO: Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE Mudane, Muuse Biixi oo khudbad muujinaysa hoggaamiye aragti dheer leh oo xambaarsan talooyin iyo tusaaleyaal u jeediyey 725 aqoonyahan oo ah dufcaddii 16aad ee ka qallinjabisa Jaamacadda Camuud ee Boorama.
September 05, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Murrashax Muuse Biixi oo khudbad macno badan u jeediyey kumanaan jamaahiir Shacab-weynaha reer Gabiley ah oo soo dhawayn indho-daraaran ah ku qaabilay maanta.
DAAWO: Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland oo soo dhawayn layaab leh oo wefti KULMIYE ah oo uu hoggaaminayey kala kulmeen shacabka Gabiley maanta barbardhigay taariikh hore oo isaga xusuus ku lahayd.
September 06, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo furay garoon cusub oo casri ah oo laga hirgeliyey magaalada Gabiley.
Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo khudbad uu tiirarka aasaasiga ah ee xisbiga iyo horumarinta Somaliland diiradda ku saaray u jeediyey shacabka reer Wajaale oo ku soo dhaweeyey taageero mahrajaan ah.
Daawo soo dhaweyntii cajiibka ahayd ee Dadweynaha degmada Wajaale u sameeyay Weftiga Xisbiga KULMIYE.
September 07, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Guddoomiyaha KULMIYE oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey dadweynaha reer Allaybaday oo si wayn u soo dhaweeyey.
Cabdicasiis Samaale oo khudbad la xidhiidha tartanka doorashada Madaxtooyada u jeediyey dadweynaha ku dhaqan Allaybaday
DAAWO: Murrashax Madaxweynaha KULMIYE oo qiiro xasuuseed darteed hadli kariwaayey, mar uu ka khudbadanayey deegaanka Indhanka ee Gobolka Gabiley.
DAAWO: Muuqaal aad u qurux badan soo dhawayntii murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE ee Gabiley.
September 08, 2017 Muse Bihi ,
Daawo: Nuxurka Khudbad uu Murrashax Muuse Biixi ku Bogaadiyey Haweenka KULMIYE ee Gabiley oo uu Xafiisyo cusub oo ay Qalabaysteen Xadhigga uga Jaray
DAAWO: Xildhibaan Cibaado oo ka mid ah oo faahfaahisay xafiisyo iyo baabuur ay haweenka Gabiley ku wareejiyeen Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE.
DAAWO: Suldaan Xuseen Aw Muuse oo ka mid ah salaadiinta miisaanka leh ee Gabiley oo caddeeyey halka shacabka Gobolka taageersanyahay
September 09, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Muuqaalka soo dhawayntii weftiga KULMIYE ee WADDO-MAKAAHIIL.
September 29, 2017 Muse Bihi ,
Daawo:Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble Oo La Dardaarmay Muj Muuse Biixi Cabdi Khudbad Balaadhana Jeediyey
September 11, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Kulankii waxgaradka beesha BAHADHAMAL taageerada ugu muujiyeen murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE
September 20, 2017 Muse Bihi ,
Waraysi: Guddoomiyaha ahna Murrashaxa Madaxweynaha Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi oo Waraysi lagaga qaaday Magaalada Boorama 24 Sanno ka hor iyo dooddiisa oo ahayd in la dhisto Somaliland la wada leeyahay oo loo siman yahay. Waraysiga waxaa qaadaya Suxufi Cabdilaahi Maxamed daahir (Cukuse) oo wakhtigan ah Wasiirka Wasaarada Xanaanada Xoolaha Somaliland.
September 12, 2017 Muse Bihi ,
Dadweynaha oo ka falceliyay Barnaanijka Xisbiga KULMIYE
Xoghaya Guud ee Xisbiga KULMIYE oo Faahfaahiyay Ujeedada Barnaamijka Cusub
Maxamed Kaahin oo sharaxay Waxyaabihii u qabsoomay Xisbiga KULMIYE
Khudbadii Madaxweyne Siilaanyo ee Daahfurka Buugga Siyaasadda KULMIYE
Guddoomiyaha KULMIYE oo jeediyay Khudbadii cajiib ah iyo balanqaadkiisa
DAAWO: murrashaxa Madaxweynaha Xisbiga Mudane, Muuse Biixi oo khudbad qiimo badan u jeediyey jaaliyadda reer Somaliland Imaaraadka oo xaflad ugu qabtay Dubai.
September 17, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Guddoomiyaha Garabka Haweenka KULMIYE oo xadhigga ka jartay xafiisyo cusub oo xisbigu ku yeelanayo xaafadda Siinaay ee degmada Axmed Dhagax oo hirgeliyeen Garabka Haweenka xisbiga ee degmadu.
DAAWO: Guddoomiyaha Garabka Dhallinyarada KULMIYE Md. Cabdinajax oo khudbad ka jeediyey xafiisyo cusub oo xisbiga looga furay degmada Axmed Dhagax.
DAAWO: Guddoomiye-ku-xigeenka koowaad ee KULMIYE Maxamed Kaahin oo khudbad uu ka jeediyey qallinjabintii Jaamacadda Hargeysa ee maanta oo uu ku tilmaamay hantida ay ka heleen dalka murrashaxiinta WADDANI iyo UCID – Cabidraxmaan Cirro iyo Faysal Cali-waraabe.
DAAWO: Dhallinyaro iyo masuuliyiin KULMIYE ah oo hadallo ka jeediyey qado-sharaf ay u sameeyeen Guddoomiye-ku-xigeenka koowaad ee Golaha Wakiillada Md. Axmed-yaasiin Sh. Cali Ayaanle.
DAAWO: Eng. Gaaxnuug oo ka mid ah ganacsatada reer Hargeysa oo ka hadlay casuumad uu u fidiyey Guddoomiye-ku-xigeenka 1aad ee Golaha Wakiillada
DAAWO: Guddoomiye-ku-xigeenka koowaad ee Golaha Wakiillada Md. Axmed-yaasiin Sh. Cali Ayaanle oo khudbad ka jeediyey casuumad qado-sharaf ah oo dhallinyaro KULMIYE ahi u sameeyeen.
DAAWO: Masuulka xisbiga KULMIYE u qaabilsan Komishanka Doorashooyinka Md. Muxumed Aw Cabdi oo jawaab ka bixiyey eedaymo labada xisbi mucaarad ee WADDANI iyo UCID kaga baxeen shir lagu falanqaynayey xeerka Anshaxa Warbaahinta ee xilliga doorashada, waxaannu dhaliilo huwiyey xisbiga WADDANI.
September 23, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Kulan dhexmaray madaxda Waqooyiga Ameriga iyo kuwa Kanada ee Xisbiga KULMIYE iyo xafiis xisbigu ka furtay magaalada Toronto.
DAAWO: Aqoonyahan Prof. Xareed oo ka tirsan xisbiga KULMIYE oo lagu soo dhaweeyey maanta Hargeysa
September 24, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE Md. Muuse Biixi oo khudbad uu ka jeediyey xaflad loo qabtay arday ka qallinjabisay Jaamacadda NEW GENERATION ee Hargeysa kaga hadlay arrimaha doorashada iyo mustaqbalka dhallinyarada reer Somaliland.
DAAWO: Murrashaxii hore ee jagada Madaxweynaha xisbiga WADDANI Mr. Maxamed Xirsi oo si rasmi ah ugu biiray xisbiga KULMIYE, kana sheekeeyey arrimo badan.
September 28, 2017 Muse Bihi ,
Khudbaddii Guddoomiyaha, ahna murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE Mudane Muuse Biixi ee Xafladdii soo dhawaynta haldoorkii ka soo digo-rogtay WADDANI, waxaannu oo gef sharci ku tilmaamay Hadal kasoo yeedhay Cabdiraxmaan Cirro
DAAWO: Dhallinyarada Gobolka Xaysimo oo si buuxda u taageeray murrashaxa jagada Madaxweynaha xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi.
DAAWO: Murrashax Muuse Biixi Cabdi iyo sidii uu u Shirguddoomiyey mid ka mid ah shirarkii ugu adkaa 27 sanno ka hor
September 30, 2017 Muse Bihi ,
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE oo dardaarankii ugu cuslaa u jeediyay Murrashaxiinta kale
DAAWO: Warka Murrashaxiinta Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenka KULMIYE oo ka qaybgalay dufcaddii u horreysay ee ka qallinjabisa dugsiga culuunta Beeraha ee deegaanka ABURIIN.
DAAWO: Khudbad Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland ka jeediyey qallinjabinta dufcaddii u horreysay ee mac-hadka culuunta Beeraha.
October 01, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Ganacsade Jabuutaawi oo qalab fara badan oo lagu xardhay astaamaha KULMIYE ku wareejiyey madaxda xisbiga.
October 02, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo jawaabo waafi ah ka bixiyey su’aalo dadweynuhu ka waydiiyeen barmaamij-siyasadeedka cusub ee xisbiga KULMIYE ku galo doorashada.
October 11, 2017 Muse Bihi ,
Tiirka Saddexaad : ee Barnaamij Siyaasadeedka Xisbiga KULMIYE oo lagu falanqaynaya kobcinta dhaqaalaha dalka JSL.
Daawo: Xisbiga KULMIYE OO Meel Adag Iska Taagay Tallaabada uu WADDANI Ku Diiday Inay Ardayda Jaamacadda Gabiley Kamid Noqdaan Shaqaalaha Doorashooyinka Soo Socda Ka Hawlgeli Doona
October 04, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Guddoomiye-ku-xigeenka koowaad ee xisbiga KULMIYE Md. Maxamed Kaahin oo khudbad uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo madaxdhaqameedka ka jeediyey xaflad lagu caleemo-saaray Suldaan Barkhad Cabdi Shaybe oo ka dhacday magaalada Burco maanta.
DAAWO: Khudbad siyaasi Axmed Muumin Seed ka jeediyey xaflad lagu caleemo-saaray Suldaan cusub Suldaan Barkhad Cabdi Shaybe oo ka dhacday magaalada Burco.
DAAWO: EX- Wasiir Samaale oo khudbad uu ka jeediyey caleemo-saarka Suldaan Barkhad Cabdi Shaybe oo ka dhacday Burco ku sharraxay hana-qaadka geedi-socodka dimuqraadiyadda Somaliland.
October 05, 2017 Muse Bihi ,
Murrashaxa Madaxweynaha xisbiga KULMIYE Mudane, Muuse Biixi oo soo Bandhigay Shahaadooyinka Siyaasadda iyo macallimiinta uu uu dheeryahay Murrashaxiinta la tartamaysa ee xisbiyada WADDANI iyo UCID.
DAAWO: Suldaan Cabdi Daahir Gaboobe oo farriin cad u diray xisbiyada mucaaradka ah, gaar ahaan WADDANI.
DAAWO: Khudbadaha siyaasiyiin, dhallinyaro iyo aqoonyahan ka mid ah haldoorka reer Boorama oo si rasmi ah ula midoobay xisbiga KULMIYE maanta.
DAAWO ENG XUSEEN BUUNI OO HADHIMO SHARAFEED KU MAAMUUSAY TAAGEERAYAAL KULMIYAA
DAAWO: Khudbad muhiim ah oo Guddoomiye-ku-xigeenka koowaad ee KULMIYE Mudane, Maxamed Kaahin u Jeediyey dhallinyaro ku soo biirtay xisbiga maanta.
October 06, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Madaxweyne-ku-xigeenka iyo Guddoomiyaha KULMIYE oo furay xafiisyo shacabka deegaanka RUQI ee degmada Baki iskood ugu furteen taageerada xisbiga
DAAWO: Xisbiga KULMIYE oo Xafiisyo ka furtay degmada Axmed Dhagax iyo sida shacabku ugu heellanyahay doorashada xisbiga.
Prof. Axmed Samatar oo faahfaahin ka bixiyey hoggaaminta iyo sifooyinka wanaagsan ee uu ku doortay murrashaxa Madaxweynaha xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi
October 12, 2017 Muse Bihi ,
Eng. Cali Xoor-xoor oo hawlo dardargelinta Xisbiga KULMIYE ah ka sameeyey Deegaano ka tirsan Gobolka Saaxil.
October 07, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Maamulka KULMIYE ee degmada 26-ka June oo ka hadlay xafiisyo xisbigu leeyahay oo la burburiyey
DAAWO: Prof. Samatar oo aqoonyahanka Boorama si wayn ugu faahfaahiyey barmaamij-siyaasadeedka cusub ee xisbiga KULMIYE.
October 09, 2017 Muse Bihi ,
Tiirka 2aad ee Barnaamij Siyaasadeedka xisbiga KULMIYE wuxuu awooda saarayaa Amniga iyo nabadda. muddo xilleedka Labaad ee Xisbiga KULMIYE wuxuu xoojinayaa tayeynta Ciidamada Qaranka sida : Ciidanka malatariga, Ciidanka Booliska , Ciidanka Asluubta , Ciidanka ilaalada xeebaha , Ciidanka Dabdemiska iyo Sirdoonka .
DAAWO: Weftiga Murrashax Muuse Biixi iyo weftigii uu hoggaaminayey ee safarka shaqo ugu maqnaa dalka Itoobiya oo ku soo laabtay dalka, waxaanna ka warbixinaya Guddoomiye-ku-xigeenka koowaad Mudane Maxamed Kaahin.
DAAWO: Wiil dhallinyaro ah oo si baaxad leh isku barbardhigay xisbiyada KULMIYE iyo WADDANI.
DAAWO: Sababta ururka dhallinyarada ee MURUQ iyo Maxkamad ay kugu soo biireen KULMIYE.
DAAWO: Maayarka caasimadda Hargeysa oo furay xafiis cusub oo xisbigu ku yeeshay Waqooyiga Hargeysa.
Xisbiga KULMIYE waxa uu ku guulaystay hagaajinta iyo horumarinta madaxbanaanida Garsoorka dalka. bartilmaameedka labaad ee Xisbiga KULMIYE waa saraynta sharci iyo sinaanta Muwaadiniinta Somaliland.
October 14, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO:Masuuliyiin iyo saraakiil ka tirsan laamaha xisbiga KULMIYE ee qurbaha oo si wayn loogu soo dhaweeyey madaarka Hargeysa maanta.
DAAWO: Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE Mudane, Muuse Biixi Cabdi oo dardaaran muhiim ah u diray Dhallinyarada Somaliland.
October 15, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Guddoomiye-ku-xigeenka kowaad ee KULMIYE oo digniin la xidhiidha doorashada u diray taageerayaasha xisbiga.
October 16, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Barbaamijka dhukumentariga ‘WAA KUMA’ Murrashax Muuse Biixi Cabdi ee shacabka reer Somaliland ku dooranayaan oo dhammaystiran.
Murrashax Muuse Biixi oo Bulshada ugu Baaqay Inay Nabadda iyo Wada-jirka Dhexdooda Muhiimad gaar ah Siiyaan Wakhtiyada ololaha iyo codaynta doorashada.
DAAWO: Aqoonyahanka, waxgaradka iyo dhallinyarada deegaamada 31 May iyo Sayla oo si buuxda u taageeray murrashaxa Madaxwweynaha KULMIYE Mudane, Muuse Biixi.
Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo tilmaamay Sababta shacabka reer Somaliland taageerada ugu ballaadhan u siiyaan xisbiga.
Shiikh Cabdilaahi Sh. Cali Jawhar oo sheegay inuu ku farxay Murrashaxnimad Muuse Biixi
October 19, 2017 Muse Bihi ,
Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo baaq muhiim ah u diray taageerayaasha xisbiga xilliga ololaha iyo doorashada
Murrashaxa KULMIYE oo taageerayaasha KULMIYE ugu baaqay olole fiican
DAAWO: Wasiirka Duulista oo fashiliyey siro uu ka hayey Wasiirkii hore ee Khaarajiga Maxamed Biixi Yoonis oo hadda ka tirsan WADDANI.
DAAWO: Siyaasi Cabdillaahi Geeljire oo shacabka u kala sharraxay taariikhda ay kala leeyihiin Murrashax Muuse Biixi Cabdi iyo Siyaasi Maxamed Biixi Yoonis.
DAAWO: Barmaamijka waa KUMA Murrashax Muuse Biixi ee lagu dooranayaa
October 24, 2017 Muse Bihi ,
Murrashaxiinta KULMIYE iyo qorshahooda la-dagaalanka Musuqa
October 25, 2017 Muse Bihi ,
Guddoomiyaha KULMIYE oo shaaciyey in aannu jirin wax sooyaal taariikheed ah oo Murrashaxa xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan Cirro ku leeyahay Qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland.
October 27, 2017 Muse Bihi ,
Maxamed Cali Bille oo kashifay Warqad Soomaaliya u qortay UN-ta oo WADDANI la xidhiidha.
DAAWO: Masuuliyiin ka qaybgalay madal lagu soo bandhigay xafiisyo iyo taageero ballaadhan oo xisbiga KULMIYE iyo Murrashaxiisa Madaxweynaha lagu siiyey magaalada Gabiley.
October 28, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Khudbada uu Ex- Wasiir Cabdillaahi Maxamed Ducaale ka jeediyey Gabiley oo uu farriin digniin ah ugu diray shacabka reer Somaliland.
October 29, 2017 Muse Bihi ,
Xoghayaha Golaha Dhexe oo dhaliilo u jeediyey xisga WADDANI oo noqday safaari.
October 30, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Wasiir Cukuse iyo reer Gabiley waxa dhexmaray.
Afhayeenka KULMIYE oo soo bandhigay guuldarrooyinka iyo qorshayaasha qarsoon ee xisbiga WADDANI.
November 03, 2017 Muse Bihi ,
Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE Mudane, Muuse Biixi Cabdi oo khudbad qiimo badan u jeediyey shacabka reer Laascaanood oo dhoollatus aad u sarreeya ku muujiyey ololaha KULMIYE.
DAAWO: ‘Anigoo guushii arkaya ku biirimaayo WADDANI, waxa ku ururay kuwii danta gaarka ah lahaa’ – Wasiir Xaglo-toosiye
November 22, 2017 Muse Bihi ,
Daawo Safiirka dawladda Ingiriiska (UK) ayaa hambalyeeyey Madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Somaliland TOGAHERER MEDIA TOGAHERER MEDIA
November 23, 2017 Muse Bihi ,
Madaxweynaha la doortay iyo Guddoomiyaha WADDANI oo kulmay iyo hadalo dhexmaray
Madaxweyne Muuse Biixi oo ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay Marxuum Axmed-yaasiin Gaba-Xaddi
Oradyahanka MO Farax oo hambalyeeyey Madaxweynaha cusub ee Somaliland
Muj Xasan Ciise oo Hambalyo u Diray Madaxweyne Muuse Biixi Kana Sheekeeyey Taariikh Hore
November 25, 2017 Muse Bihi ,
Madaxweynaha la doortay Md Muuse Biixi Cabdi oo kulan la qaatay guddiga Ololaha ee goboladda dalka Jamhuuriyadda Somaliland.
November 27, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Madaxda Laamaha Dibadda KULMIYE iyo qurba-joogga taageera xisbiga oo hadallo hambalyo iyo dardaaran ah siiyey Madaxweynaha cusub ee Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi.
” Degmo waliba waxay isleedahay adduun baa lagu dayacay ” Madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi
November 28, 2017 Muse Bihi ,
Madaxweynaha Cusub ee Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo u mahadceliyay Muraaqibiintii Xisbiga KULMIYE iyo Guddiyadii ka shaqeeyey hawlgalintooda.
November 30, 2017 Muse Bihi ,
Madaxweynaha cusub ee Somaliland Mudane, Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhambaal tacsi ah u diray shacabka geerida Guddoomiyihii Guddiga Diiwaangelinta Ururrada iyo Ansixinta Axsaabta Siyaasadda Marxuum Cabdirisaaq Ciyaale oo uu ka qaybgalay aas qaran loogu sameeyey Hargeysa.
December 21, 2017 Muse Bihi ,
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo kulan la qaatay Madaxda Hay’adda shaqaalaha dowladda Somaliland.
December 23, 2017 Muse Bihi ,
Madaxweynaha JSL oo daah-furay Qorshaha lagu dersayo Waxqabadka xukumadda ee 120 maalmood ee hore
December 25, 2017 Muse Bihi ,
DAAWO: Waxyaabaha lagaga wadahadlay Kulanka Madaxweyne Muuse Biixi xafiiskiisa ku qaabilay Guddoomiyaha WADDANI iyo xubno ka mid ah hoggaanka xisbigaasi.
December 26, 2017 Muse Bihi ,
Ethiopia: Interview with the newly elected president of Somaliland Muse Bihi Abdi – Fitlefit
January 20, 2018 Muse Bihi ,
Daawo Nuxurka Khudbad Dhinacyo Badan Taabanaysa oo uu madaxweyne Muuse Biixi Maanta shacabka u jeediyey iyo garnaqsi uu beesha caalamka u diray
November 13, 2016 Our Programs , Volunteering
Khudbad Guddoomiyaha KULMIYE ka jeediyey Gunnaanadka Diiwaangelinta Somaliland
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE oo soo dhaweeyay Siyaasiyiin Kusoo biiray KULMIYE
Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland oo ka hadlay Siyaasiyiin kusoo biiray KULMIYE